Heshiiskan oo Turkiga uu 27-kii November magaalada Istanbul kula saxiixday ra’iisul wasaaraha dowladda la aqoonsan yahay ee Libya Fayed al-Sarraj ayaan weli laga helin faah-faahin buuxda.
Hase yeeshee wabixino warbaahineed qaarkood ayaa sheegaya inuu saddex meelood meel kordhinayo qalfoof-badeedka Tukrey, una ogolaanayo inay hesho dhul-badeed dhowaan la ogaaday inay ka buuxaan gaas iyo saliid oo dhaca bariga badda Mediterranean-ka.
Heshiiska ayaa dhul-badeedkan u diidaya dalalka Greece, Cyprus iyo Masar, oo sidoo kale raadinayey.
‘Tani waa xuquuq madax-banaani oo ay leeyihiin Libya iyo Turkey,” ayuu Erdogan u sheegay weriyayaasha isaga oo ku sugan garoonka diyaaradaha magaalada Ankara, ka hor inta aanu u bixin shirka NATO ee London.
Greece ayaa ku hanjabtay inay cayrin doonto safiirka Libya, haddii aan loo soo gudbin faah-faahinta heshiiska.
Warbaahinta Turkiga ayaa sheegay in Akara ay QM u gudbin doonto aageeda cusub ee dhaqaalaha (EEZ) marka heshiiska uu ansixiyo baarlamanka Turkey.